🥇 ▷ - Edition Redmi K20 Pro Exclusive Edition oo leh SD855 + ayaa imaan doona Sebtember 19 »- ✅
– Edition Redmi K20 Pro Exclusive Edition oo leh SD855 + ayaa imaan doona Sebtember 19 »-
Kadib soo-saareha processor-ka Snapdragon 855+, waxaan horey u aragnay soosaarayaal soo bandhigaya Moodooyinka cusboonaysiinta ee caashaqdooda sanadkan laakiin ka hooseeya mashiinka qalabka cusub. Haddaba, Maareeyaha Guud ee Redmi ayaa shaaca ka qaaday in Redmi K20 Pro waxay ka mid noqon doontaa aaladahaan la hagaajiyay. Telefoonku wuxuu heli doonaa nooc leh Snapdragon 855+ oo la yiraahdo Redmi K20 Pro Exclusive Edition.
Redmi K20 Pro Exclusive Edition oo wata Snapdragon 855+
Moodhka asliga ah ayaa la shaaciyey inta lagu gudajiray bisha May oo uu sii socday iibka bisha Juun. Markii la shaaciyey, wuxuu ka mid ahaa taleefannada leh processor-ka Snapdragon 855 oo leh dhibco ugu sarreeya Antutu. Lu Weibing wuxuu yiri hadafka shirkaddu waa abuur calan dhab ah oo leh waxqabadka ugu adag ee ka adkaan kara tartanka. Sidaa darteed ku dhawaaqista Nuqul Gaar ah oo ay soo saartay Snapdragon cusub 855+.
Snapdragon 855+ wuxuu leeyahay a xawaare saacad sarreeya marka la barbar dhigo kuwii ka horreeyay, gaadhaya ilaa 2.96GHz. Waxay sidoo kale leedahay a 15% horumar ayaa ka gaadhay waxqabadka GPU. Lu Weibing ayaa intaa ku dartay in daabacaadda qaaska ah wuxuu gaarayaa 473,183 dhibcood oo ka socda aaladda bartilmaameedka Antutu. Daabacaadii caadiga ahayd ee Redmi K20 Pro waxay dhalisay 458,754 dhibco isku mid ah marka la barbar dhigo.
Ma u baahan doonno muddo dheer inta imaatinka Redmi K20 Pro Exclusive Edition. Akoonka rasmiga ah ee Redmi ee shabakada bulshada Weibo ayaa shaaca ka qaaday arintaas Waxay bilaabmi doontaa Khamiista, Sebtember 19 saacaddu markay tahay 8 PM (waqtiga maxalliga ah). Marka laga reebo isbedelka ku yimid mashiinka, inta kale ee tilmaamaha waa inay ahaadaan isku mid in ka badan daabacaaddii caadiga ahayd ee casriga.
Telefoonku wuxuu leeyahay a 6.39 inch screen iyadoo qaraar ah 1080 x 2340. Waa guddi AMOLED leh akhristaha farta dhafan oo isku dhafan. Nashqadeedu waa shaashad buuxda oo aan lahayn wax goynaysa ama goynaysa isla. Redmi waxay u dooratay qaabka naqshadeynta a kamarad horusocod ah
Telefoonka ayaa la imanaya 8 GB oo RAM ah iyo ilaa 256 GB oo kayd ah gudaha. Si kastaba ha noqotee, waxay u egtahay in Edition-ka Exclusive ay lahaan karto hal qaabeyn oo ay tahay tan ugu sarreysa ee laga heli karo qadka Redmi K20 Pro. Waxay leedahay qaabeynta of kamarad saddex-geesood ah dhabarkiisa waxaa sameeyay dareemayaal 48MP + 8MP + 13MP. Dhanka kale, kaamirada hore ee moodeelka wareega ah waa 20MP dareemayaasha
Telefoonku sidoo kale wuxuu leeyahay a 3,5mm jaakada maqalka, NFC, Bluetooth 5.0 iyo dekada USB Type-C. Waxaa ku jira mid 4000 mAh batteriga oo lagu taageero kicinta degdegga ah ee 27W fiilada.
redmiredmi k20 proredmi k20 pro Editionmi k20 pro sd 855 + redmi k20 pro sd855 + redmi k20 pro snapdragon 855 + Xiaomi